Malunga nathi -Shenzhen Sihai Packaging Material Co, Ltd.
Ukupakishwa kweShenzhen Sihai
Imathiriyeli Co, Ltd.
I-Shenzhen Sihai Packaging Material Co, Ltd ngumvelisi weemveliso zokupakisha ezikwiphepha e-Shenzhen China, sineminyaka engaphezu kwe-12 sisebenza kwiphepha lepl, iphepha elingenanto, iphepha elityhidiweyo (njengoko lisazi njengephepha lekhaphethi, iphepha le-coroplast , iphe yebhodi engenanto) iimveliso zokupakisha. Kk incence sheet, iphepha ezibuhlazarha yinto yokupakisha entsha inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zamashishini, ibhodi ye-pp yinto ebhetyebhetye yokupakisha ingenziwa nabuphi na ubungakanani, nabuphi na ubume kunye neemveliso zokupakisha zoyilo olwenziweyo.
We are specialised in the design, development, production and service of pp incence sheet, pp umhadi sheet, iphe iibhokisi, pp iibhokisi incence, pp ulwahlulo, pp imiqondiso corflute, ibhodi yentengiso, iibhotile umaleko pad, cargos umaleko pad nabanye ukupakisha nokuthumela iimveliso ngaphezulu kweminyaka eli-12. Iimveliso zethu zisetyenziswe ngokubanzi ekupakisheni, ekushicileleni, kwizixhobo, kwiibhokisi zokudlulisa, oomatshini bokukhanya, ikhemesti, isibulali zinambuzane, intengiso, umhombiso, amanqaku enkcubeko kunye nobunjineli bebhayoloji.
Inkampani yethu ine-3 ephezulu yokusebenza kwemigca yokuvelisa iphepha, enokuvelisa ibhodi engenanto yeenkcukacha ezahlukeneyo ngobunzima be-2mm-12mm, ububanzi obukhulu be-2300mm kunye nobude obungenamkhawulo, kunye nemveliso yenyanga engaphezulu kweetoni ezili-120.
Iimveliso zethu ezingundoqo iphepha PP ezibuhlazarha, zonke iintlobo umbala kunye nezimeleyo pp iphepha ezibuhlazarha (pp sheet incence), pad umaleko, ikhadi ulwahlulo, ibhokisi ingeniso kunye anti-static sheet ezibuhlazarha, iimveliso ESD ukupakisha. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zombane, iplastiki yentsimbi, umhombiso wasekhaya, umhombiso wentengiso, iziqhamo kunye nokupakishwa kwemifuno, imithwalo, ukuhanjiswa kosana, iinxalenye zemoto, ukunkonkxa iglasi kunye namanye amashishini.
Sineqela leengcali, ulawulo olungqongqo, izixhobo ezisemagqabini ukwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Sikwangumthengisi wexesha elide kumaqela e-TCL kunye ne-HUAWEI. Sikwanayo nenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM, inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM iyabulala kubathengi. Ukuphucula ukwaneliseka kwabathengi kunye nokugqitha kulindelo lwabathengi kukuzibophelela okubalulekileyo kwenkampani yeSihai. Sinike ithuba lokubonisa into esinokukwenzela yona ngokunxibelelana nathi ukuze uthethe nathi simahla.